Ny fanapahana fitsangatsanganana any Hawaii izao dia fanapahan-kevitra momba ny fiainana sy ny fahafatesana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Ny fanapahana fitsangatsanganana any Hawaii izao dia fanapahan-kevitra momba ny fiainana sy ny fahafatesana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Safety • teknolojia • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny trano fandraisam-bahiny, fisarihana, fitaterana, fivarotana ary trano fisakafoanana dia niady mba hanokatra indray ny asa any amin'ny State of Hawaii. Ny Airlines dia nanampy toerana fivarotana fizahan-tany vaovao ho an'ny Aloha Fanjakana. Tsara ny orinasa - saingy iraka hamono tena ve ity?
Ho avy ny fifidianana. Tsy misy olona ao amin'ny Fanjakana sahy manome soso-kevitra sy manery ny fameperana ilaina fatratra mba hanamorana ny dia tsara any Hawaii indray.
Faritra inona amin'i Hawaii no tsy azo antoka hitsidika azy izao?
Inona no ampahany amin'ny “Tsy azo antoka ho an'ny mpitsidika i Hawaii”Tsy takatry ny mpizaha tany ve rehefa manenika ny morontsirak'i Hawaii miaraka amin'ny lamba famaohana eo akaikin'ny lamba famaohana izy ireo, ka mahatonga ny fahasarotana ara-tsosialy tsy ho vita?
Inona ny ampahan'ny "Tsy azo antoka ho an'ny mpitsidika i Hawaii ” tsy mahazo ve izy ireo rehefa ny andalana maharitra adiny iray mankany amin'ny trano fisakafoanana no mahazatra?
Inona ny ampahan'ny "Tsy milamina i Hawaii mpitsidika ” tsy takatra rehefa tsy raisin'ireo mpizahatany intsony, ny hopitaly dia mihodina 125%, ary ny malaza Aloha Fanahy nanjavona?
Mbola mitombo hatrany ny fizahan-tany any Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, ary ny Nosy Lehibe Hawaii, na dia ny Governoran'i Hawaii Ige aza, ny Lt. Governora Green, ny lehiben'ny CDC, ary i John De Fries, tale jeneralin'ny Hawaii fizahan-tany fizahan-tany, dia miangavy ny mpitsidika tsy handeha amin'ny Aloha Milaza amin'izao fotoana izao.
Ny hafatra mazava ho an'ny mponina sy ny mpitsidika dia ny “Fitsangatsanganana ilaina ihany!”
The taham-pahafatesana anio ino avo indrindra voarakitra any Hawaii nandritra ny krizy COVID-19.
Tranga Coranavirus any Hawaii
Tamin'ny 24 Aogositra 2020, ny State of Hawaii dia nisoratra anarana tranga COVID-169 19 vaovao tao anatin'ny iray andro, ka niteraka fameperana sy fanidiana mafy.
Tamin'ny 25 aogositra 2021, ny State of Hawaii dia nanoratra tranga 625 vaovao COVID-19 tao anatin'ny iray andro. Feperana kely fotsiny ary tsy misy fanidiana hidin-trano.
Fahafatesana COVID-19 tany Hawaii
Tamin'ny 24 Aogositra 2020, tsy nisy maty tany Hawaii tamin'ny COVID-19. Nandritra ny tampon'ilay areti-mandringana io.
Tamin'ny 25 aogositra 2021 dia olona 8 no matin'ny COVID-19 tany Hawaii, izay isa ambony indrindra voarakitra tao anatin'ny iray andro hatramin'ny nivoahan'ny valanaretina.
Fahatongavana amin'ny fifamoivoizana
Tamin'ny 23 aogositra 2019, olona 21,475 no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidin'i Hawaii avy tany amin'ny toerana itodiana amerikana.
Tamin'ny 23 Aogositra 2020, dia nihena ho 1,700 ny isa tonga. Tsy nisy nanao vaksiny.
Tamin'ny 23 aogositra 2021 dia totalin'ny mpitsangatsangana 23,548 no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidin'i Hawaii avy amin'ireo fanjakana 49 amerikana hafa.
Isaina ireo mpandeha an-dranomasina trans-Pasifika avy amin'ny sisa amin'ny Etazonia tonga any Honolulu, Kahului, Lihue, Hilo, ary Kona.
Tamin'ny volana aogositra 2020 dia tsy nisy nanao vaksiny.
Tamin'ny volana aogositra 2021 mihoatra ny 70% tany Hawaii no nahazo fatra farafaharatsiny iray amin'ny Vaksiny.
Araka ny filazan'ny Lt. Governora Green, tizy izao dia 125% ny tahan'ny toeram-pitsaboana ao amin'ny State of Hawaii. Ireo olona voan'ny aretim-po sy aretina lehibe hafa dia tsy mahazo mampiasa ICU intsony noho ny habetsahan'ny mararin'ny Coronavirus.
Marary i Hawaii. Marary be i Hawaii noho ireo firenena toa an'i Bahamas, ohatra, izay ao anatin'ny fampitandremana momba ny dia 4 an'i Etazonia milaza hoe:
AZA MIFANDROSO AMIN'NY FOTOANA ITY !
Tokony hampiseho ny sasany ny mpitsidika ALOHA ho an'ny mponin'i Hawaii ary mijanona ao an-trano.
Ny fizahantany dia ny loharanom-bola lehibe tokana lehibe indrindra an'ny Toekaren'i Hawai'i. Tamin'ny taona 2019, ny toekarem-pizahan'i Hawai'i dia nanoratra:
➢ Ny vola miditra amin'ny hetra amin'ny fanjakana: 2.07 miliara dolara (+1.4%, + $ 28.5 tapitrisa YOY mifanohitra amin'ny 2018).
Ri Fahatongavan'ireo mpitsidika amin'ny taona 2019: 10,424,995.
Toekarena vs. fahasalamana
Ny mpandresy mazava dia toa ny toekarem-pizahan-tany any Hawaii. Angamba izany no ao an-tsain'ireo mpanao fihetsiketsehana miady amin'ny vaksiny rehefa manao fihetsiketsehana manoloana ny tranon'i Lt. Governora Green izy ireo.
25 Aogositra 2021 amin'ny 14:55
Ny teboka dia: mihazakazaka amin'ny hopitaly 125% ny hopitalinay ary tsy misy fandriana ICU intsony. Tena tsy mampisy fahasamihafana na iza na iza mitondra ny virus any amin'ny Fanjakantsika. Tokony ho efa nanao an'io dinika io isika taloha.
25 Aogositra 2021 amin'ny 13:56
Raha hanoratra lohateny mampihetsi-po clickbait toa izao ianao farafaharatsiny, ataovy tsara ny fitsipi-pitenenana! Na dia marina aza ny antontan'isa dia tsy misy porofo na iza na iza mifandraika amin'ny fanaparitahana eto.